Maitiro ekuvandudza Play Store pane Android TV ▷ ➡️ Android Pop ▷ ➡️
Maitiro ekuvandudza Play Play pane Android TV
Maitiro ekuvandudza Play Play pane Android TV, Chikwata cheGoogle chakazivisa mwedzi wapfuura kuti chakatangisa chitsva shanduro nyowani yeGoogle Play Chitoro yeiyo Android TV based zvishandiso, neimwe zvimwe zvemazuva ano uye zvirinani interface zvakarongeka.
La Nyowani Chitoro Chekutamba chinotaridzika sekuwedzera kweiyo Android TV imba chidzitiro, uye kune akati wandei kunyorera pane yako yekumba skrini iyo inogona kupa vhidhiyo preview kumashure kana iwe uchifamba pamusoro payo.
Izvo zvinoshandiswa zvakapatsanurwa muzvikamu zvakasiyana (zvese zvichienderana nezvinodiwa nemushandisi wega wega uye zvakare zvinosanganisira varaidzo, kugwinya, mitambo uye nezvimwe).
Saka unogona kugadzirisa Play Play pane Android TV
Dhizaini nhau dzinogona kuwanikwawo pazviratidziro zvakakumikidzwa kune mamwe manyorerwo, anozivikanwa nemazita akakurisa uye mamwe makiyi anoonekwa, kunyangwe kana rondedzero yacho kazhinji iri mungozi yekuve 'kutemwa' nepakati.
Google yakagadziridza mashandiro eichi chitsva Tamba Chitoro pane Android TV, sepachikona «Zvandinoshandisa", Iko kune runyorwa rwezvishandiso zvakamirira kugadzirisa uye zvese zvakaiswa zvinoratidzwa, pamwe nechikamu chitsva chemashandisirwo akaiswa pane mamwe madivayiri.
Zvinosara kuti zvionekwe kuti dhizaini nyowani iyi inogona kukanganisa iyo mashandiro ezvimwe zvigadzirwa zveTV TV (funga nezvemifananidzo paunenge uchivhura maapplication), kunyanya zvakachipa kana zvekare.
Maitiro ekuisa iyo nyowani Google Play Chitoro pane Android TV
Kana mudziyo wako usati wagamuchira iyo nyowani vhezheni kubva kuchitoro, unogona kumanikidza iyo yekuvandudza. Aya ndiwo matanho ekutevera.
Vhura yazvino vhezheni yeGoogle Store,
Endai kumasethingi uye tsvaga yazvino vhezheni yechitoro (muchikamu chemashoko),
Kurumidza kubata iyo vhezheni nhamba kudzamara meseji yaonekwa ichizivisa kuti vhezheni itsva yavapo, inozotorwa pasi nekuiswa,
Mirira maminetsi mashoma ekurodha pasi uye kumisikidza wobva watangazve iyo Play Store.
Android TV, Play Store
Maitiro ekuvharira mameseji kubva kuWhatsApp kuonana neApple
Maitiro ekutumira email neGoogle Mubatsiri kubva kune yako Android nhare